Tsy Eken’ny Firenena Mikambana Ny Pasipaoro Avy Ao Taiwan, Laviny Tsy Hiditra Ny Birao Ao Zeneva · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Septambra 2015 5:38 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 한국어, polski, Français, русский, English
Ny 15 Septambra 2015, rehefa nisidina nankany Soisa i Yu-Ling Tsai, teratany Taiwanais, handeha hitsidika ny biraon'ny Firenena Mikambana ao Zeneva (UNOG), dia nilazàn'ny teo amin'ny mpandray vahiny fa antontan-taratasy tsy manankery ny pasipaorony ary dia ny karapanondrony no notakiana hasehony. Taorian'ny fampisehoany ny karapanondrony avy any Taiwan dia mbola nolavina indray i Yu-Ling Tsai. Nolazain'ny mpiasan'ny Firenena Mikambana fa tsy ekena ny pasipaoro sy karapanondro navoakan'ny governemanta ao Taiwan. Fanampin'izany, nolazain'ilay mpiasan'ny Firenena Mikammbana fa tany ao anatin'i Shina i Taiwan, ka noho izany dia afaka hiditra ny UNOG izy raha mampiseho pasipaoro navoakan'ny Repoblikan'i Shina.. Hoy i Tsai tao anaty lahatsoratra iray tao amin'ny Facebook :
Rehefa nanao fangatahana fanazavana ofisialy avy amin'ny Firenena Mikambana ireo Taiwanais mpanangona vaovao, momba ny fepetra misy ao aminy, nolazain'i Rhéal LeBlanc, mpitondra tenin'ny UNOG fa na dia mandray ireo olona rehetra avy amin'ny lafivalon'ny tany tonga hitsidika azy aza ny Firenena Mikambana, tsy manaiky kosa ireo pasipaoro avoakan'ny Taiwan (ROC). Raha mikasa hitsidika ny biraon'ny Firenena Mikambana ny teratany avy ao Taiwan, hoy i LeBlanc nanampy, dia ilain'izy ireo ny mampiseho fahazoandàlana mamily fiara ara-dalàna na karapanondro hafa. Kanefa, raha ny olan'i Tsai, tsy nekena ny karapanondrom-pireneny.
Na nanambara tamin'ny BBC aza ny UNOG fa fisehoan-javatra iray monja ny an'i Tsai, efa nisy ohatra hafa momba ireo tranga hafa tahaka izany. Ny 10 Janoary 2015, nolavin'ny mpandray vahiny tao amin'ny UNOG i Min-Shiuan Wangon, olompirenena avy any Taiwan, satria pasipaoro Taiwanais no hany antontan-taratasy teny aminy. Tany am-piandohan'ny 2012, zavatra tsy nisy hafa tamin'izany no nanjo ny teratany Taiwanais iray hafa.
Efa nandà ihany koa tsy handray ireo manampahefana avy any Taiwan tonga hitsidika ny foiben-toerany sy hanatrika ireo fivoriana diplaomatika nokarakarainy ny Firenena Mikambana, raha vao pasipaoro avy amin'ny fireneny ihany no asehon'ireo solontena avy any Taiwan. Raha nikasa ny hanatrika ilay fivoriana alefa amin'ny zanabolana nokarakarain'ny Kaomisionan'ny Firenena Mikambana momba ny Satan'ny Vehivavy, natao tao New York tamin'ity taona ity i Jing-Yi Lin, dia tsy nomena alàlana hiditra tao am-pivoriana satria pasipaoroTaiwanais no teny aminy.
Tany amboalohany, ny 22 May 2012, rehefa nikasa ny hiditra ny lalantsara natao ho an'ny daholobe tao amin'ny Fivoriambe Erantany ho an'ny Fahasalamana ny Andiany Mpampiroborobo ny Fikambanana Erantany momba ny Fahasalamana (OMS) avy any Taiwan ka nampiseho ny pasipaorony fa tsy ny karapanondrom-pireneny, dia noroahana satria ny mpiasan'ny OMS nilaza tamin'izy ireo hoe tsy manaiky ny pasipaoro avy any Taiwan ry zareo.
Ninoan'i Hsing-Che Tu, talen'ilay Andiany Mpampiroborobo ny Fikambanana Erantany momba ny Fahasalamana (OMS) sady efa lefitry ny minisitry ny fahasalamana tao Taiwan, fa fihetsika fanalàna baraka ilay fanilihana ny pasipaoro Taiwanais: